कस्ता मानिसहरूले परमेश्वोरको आशिष्‌हरू प्राप्त गर्दछ ? – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – सबै जना परमेश्वरबाट आशिष्‌ पाउन चाहान्छन्। त्यसोभए, परमेश्वरबाट पाईने साँचो आशिष्‌हरू के-के हुन्? कस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वोरले आशिष्‌ दिनुहुन्छ? हामी कसरी परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न सक्छौं? परमेश्वोरबाटको आशिष्‌को बारेमा ३ शीर्षकहरूमा तपाईंलाई उहाँको आशीर्वादहरू प्राप्त गर्ने तरिका पत्ता लगाउन मार्गदर्शन गर्नेछ।
परमेश्वोरका आशिषहरु के हुन्?
धेरै व्यक्तिहरूको विश्वास छ कि ईश्वरीय आशिष्हरू प्राप्त गर्नुको मतलब तिनीहरू आफ्नो जीवनभर शान्तिमा रहन सक्दछन्, भौतिक धनको आनन्द लिन सक्दछन् र सुखी परिवार पाउँदछन्। अरूहरू सोच्दछन् कि परमेश्वरको आशिषको अर्थ सबै प्रकारको उपहारहरू हुन्छन् र प्रभुको लागि प्रचार गर्नु पर्छ। के परीक्षाहरू र कठिनाइहरू परमेश्वोरका आशिषहरू होइनन ? निम्न बाइबलका पदहरूले तपाईंलाई परमेश्वोरका आशिष्‌हरूबारे राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ।
भजनसंग्रह २३:१-६ “परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुदैन । उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुञ्छ, र मलाई शान्त पानी छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानुपरे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउनेछैन, उसको नामको खातिर किनकि तपाईं मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईको लठ्ठी र तपाईको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन । मेरो शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईंलेमेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईंले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईंको भलाई र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ, र म परमप्रभुको घरमा सदासर्वदै वास गर्नेछु।”
याकुब १:१२ “त्यो मानिस धन्यको हो, जो आपत-विपतमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वोरले उहालाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।”
प्रकाश ३:१० “तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेको हुनाले, तिमीलाई परिक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु, जो पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ।”
प्रकाश २:७ “जसको कान छ, त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरुलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वोरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रूखबाट खान दिनेछु।”
प्रकाश २१:३-४ “सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को सोर मैले सुनें, “हेर, परमेश्वोरको वास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग वास गर्नुहुनेछ, र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन्, र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वोर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रुपले पुछिदिनुहुनेछ, र फेरि मृत्यु नै हुनेछैन, र शोक र पीडा पनि हुनेछैन। किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन।”
१ यूहन्ना २:२५ “उहाँले हामीलाई जे प्रतिज्ञा गर्नुभयो त्यो हो – अनन्त जीवन।”
परमेश्वोरले कस्ता मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ?
एक व्यक्तिलाई आशिष् दिन, परमेश्वरसँग सधैं आफ्नै सिद्धान्त छ। त्यसोभए के मानिसहरूले परमेश्वरको आशिष् पाउन सक्छन्? निम्न बाइबलका पदहरूले तपाईंलाई त्यो स्तरहरू देखाउनेछ।
भजनसंग्रह ५:१२ “किनकि हे परमप्रभु, तपाईंले धर्मीहरूलाई आशिष् दिनुहुन्छ, ढालले रक्षा गरेझै आफ्नो कृपा-दृष्टिले तिनीहरूलाई घेरिराख्नुहुन्छ।”
उत्पति २२:१६-१८ “परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै नाउमा शपथ खाएको छु, कि तैले यो काम गरेकोले र तेरो छोरो, अर्थात् तेरो एउटै छोरालाई पनि म बाट नरोकेकोले म निश्चय नै तलाई आशिष् दिनेछु। तेरा सन्तानको व्रिद्दि गरेर आकाशका तारा र समुन्द्र किनारका बालुवासरह म तुल्याउनेछु । तेरा सन्तानले आफ्ना शत्रुहरूका शहरहरू कब्जा गर्नेछन। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशिर्वादी हुनेछन्, किनकि तैले मेरो वचन पालन गरिस।”
मात्ति १६:१८-१९ “म तिमीलाई भन्दछु, कि तिमी पत्रुस हौ। म मरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु, र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजयी हुनेछैनन्। म तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु, जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ, सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाओला, सो स्वर्गमा फुकाईनेछ।”
मात्ति १५:१८-१९ “तर जुन कुराहरू मुखबाट बाहिर आउछन, ति हृदयबाट निस्कनछन र तिनैले मानिसलाई अशुद्ध तुल्याउँछन । किनकि हृदयबाट नै विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूटो गवाही, र निन्दा बाहिर निस्कनछन।”
यूहन्ना २०:२९ “येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “तिमीले मलाई देखेको कारणले मामाथि विश्वास गरेका हौ? धन्य हुन तीनिहरू, जसले मलाई देखेका छैनन्, र पनि विश्वास गर्छन।”
प्रकाश २२:१४ “जीवनका व्रिक्षको हक पाउन र शहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊ भनि आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्।”
प्रकाश १९:९ “अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, “यो लेख, थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। तिनले फेरि मलाई भने, “परमेश्वोरका सत्य वचनहरू यी नै हुन्।”
प्रकाश ७:१४-१७ “अनि मैले तिनलाई भने, “हजुर, तपाईनै जान्नुहुन्छ। ” तिनले मलाई भने, “यिनीहरू ति नै हुन्, जुनहरू महासंकष्टबाट आएका हुन्, र तिनीहरूले आफ्ना-आफ्ना पोशाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन् । यसैकारण “तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको साम्मुन्ने छन् , र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन, र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई सरन दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिल्यै भोकाउने र तिर्खाउनेछैनन्। सुर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्नेछैन, किनकि सिंहासनको बिचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठाला हुनुहुनेछ, र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ, र परमेश्वोर ले तिनीहरुका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ।”
हामी कसरी परमेश्वरबाट आशिष्‌ पाउन सक्छौं?
बाइबलबाट यो देख्न सकिन्छ कि यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं र उहाँमाथिको विश्वासमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौं भने मात्र हामीलाई परमेश्वरले आशिष्‌ दिनुहुनेछ। यदि हामी ईश्वरीय मार्ग अनुसरण गर्छौं – परमेश्वरलाई आदर गर्छौ र दुष्टकुराहरूबाट अलग रहन्छौं भने – हामीले उहाँको आशिष् पाउन सक्दछौं। जब अन्तिम दिनहरूमा प्रभु फर्कनुहुन्छ, उक्त समयमा परमेश्वरको आवाज चिन्ने र भेडाको पाइलालाई राम्ररी पछ्याउन सक्नेहरूले मात्र बढी आशिष् पाउनेछन्। तल दिइएको बाइबलका पदहरू पढ्नुहोस् र तपाईंले परमेश्वरको आशिष्‌ कसरी पाउने भन्नेबारे सिक्नुहुनेछ।
भजनसंग्रह ११५:१३ “ठूलो र साना दुवै परमप्रभुका भय मान्नेहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ।”
व्यवस्था ५:१० “तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौ पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु ।”
मत्ती १८:३-४ “अनि उहाँले यसो भन्नुभयो: “साँच्चै, म तिमीहरूलाई भन्दछु, मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालकहरूजस्ता भएनौ भने कहिल्यै स्वर्गको राज्यमा पस्नेछैनौ। जसले यो सानो बालकजस्तै आफुलाई नम्र तुल्याउछ, त्यहि स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ।”
हिब्रु १२:१४ “सबै माहिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सख्दैन।”
यूहन्ना १०:२७-२८ “मेरो भेडाहरू ले मेरो सोर सुन्छन, र तिनीहरूलाई म चिन्छु, र तिनीहरू मरो पछिआउँछन् । तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुनेछैनन्, र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजानेछैन।”
प्रकाश ३:२० “हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वोर सुनेर ढोका खोलिदियो भने, म त्यसकहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु, र त्यसले मसँग खानेछ।”
प्रकाश १४:४-५ “तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन, र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता-जता जानुहुन्छ उहाँको पछिपछि लाग्नेहरू यिनीहरूनै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बिचबाट यिनीहरु मोल तिरी छुट्याइएका थिए। तिनीहरूका मुखमा कुनै झूट पाइएन, तिनीहरू निष्खोट छन्।
Posted on June 16, 2020 June 17, 2020 Author Shalom Nepal
विश्वासको उच्च उडान भर्नुहोस्।